Sawir Arteum.ro on Kala bixi
Philanthropies waxay u heellan tahay ficil wadareed waara oo looga jawaabayo Xaaladda Degdega ah ee Cimilada
Maalintii shanaad ee sannadguuradii shanaad ee Heshiiskii Paris, samafalayaasha ay ka mid yihiin hay'adda McKnight Foundation waxay hoosta ka xarriiqeen oo ay sare u qaadeen ballanqaadkooda ku aaddan maalgashiga xalalka cimilada.
Bishii Sebtember 2018, 29 maalgeliyeyaashu waxay sameeyeen ballanqaad isku dhafan oo ay ku bixinayaan $4 bilyan si wax looga qabto dhibaatada cimilada ee Shirka Waxqabadka Cimilada Adduunka (GCAS). Kooxda asalka ah waxay ku socotaa wadadii ay ku dhaafin laheyd balanqaadka, iyada oo ay ugu wacan tahay koror aad u badan oo ka yimid dhowr maalgeliyeyaal, iyo sidoo kale deeq bixiyeyaal dheeri ah oo deeq bixiya oo sameynaya ilo cusub. Waxay hadda ku socotaa wadiiqad ay ku maal gasho ugu yaraan $6 bilyan oo doolar sanadka 2025, waxayna u badan tahay in dhammaan samafalayaasha si firfircoon loogu casuumay inay u qoondeeyaan qayb ka mid ah faylalka ay ka shaqeeyaan sababahan muhiimka ah. Ogeysiiskan waxaa lagu sameeyay waqtigii loogu talagalay Shirka Cimilada Cimilada ee 12 Diseembar 2020, la arki karo halkan.
Waxaa jira wacyigelin caalami ah oo sii kordheysa oo ka dhex jirta samafalayaasha baahida loo qabo in si weyn loo dardargeliyo cimilada la xaqiijiyay iyo istiraatiijiyadda tamarta nadiifka ah, dhiirrigelinta hal-abuurnimada, iyo ururrada taageera adduunka oo dhan ee ka shaqeynaya ilaalinta dhammaan nolosha dhulkeenna. Horumarka ayaa lala socon doonaa inta kahoreysa Shirka Cimilada Qaramada Midoobay ee lagu qabanayo Glasgow sanadka soo socda.
Deeqsinimada samafalayaasha cusub iyo bulshada samafalka cimilada jirta waa in loo dabaaldegaa. Si kastaba ha noqotee, weli kuma filna in aan la kulanno caqabadaha aan adduunka kala kulanno, oo hadda oo keliya 2% ee maalgelinta samafalka caalamiga ah ayaa ka go'an in lagu xalliyo dhibaatada cimilada, iyadoo xoogaa yar la saarayo, gaar ahaan, caddaaladda bulshada, soo-kabashada cagaaran-19, iyo abuurista bulsho cadaalad ku dhisan.
Samafalka iyo sadaqeynta sadaqo kasta oo la bixiyo waxay bixisaa raasamaalka ugu dabacsan iyo taageerada bulshada rayidka ah. Waxay maalgelisaa shaqo muhiim ah oo aysan qaban karin dawladaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, ama taas oo kicin kara xalalka cimilada. Sidaa darteed waxaan si firfircoon u dhiirigelinaynaa deeq-bixiyeyaal badan, shakhsiyaad deeq-bixiyeyaal ah, iyo hay'ado inay kordhiyaan diiradooda wax ka qabashada dhibaatada cimilada oo ay nagu soo biiraan si aan gacan uga geysano sidii loo hubin lahaa inaan buuxin karno shuruudaha heshiiskii taariikhiga ahaa ee Paris. Maalgelin dheeri ah, hammi weyn iyo ficil wax ku ool ah ayaa gabi ahaanba lama huraan u ah in lagu dhaqaaqo horumarka loo maro adduunyo eber ah oo aan ka badnayn 1.5 darajo oo kululaaneysa.
Kate Hampton, oo ah madaxa CIFF: Xaaladda degdegga ah ee cimilada ayaa wiiqaysa xuquuqda carruurta ee caafimaadka iyo ladnaanta. Qeybta samafalka waa inay cabiraan deeqaha cimilada la siinayo si ay u taageeraan ka soo kabashada cudurka faafa ee Covid-19. Waxaan haysannaa fursad aan horay loo arag oo 2021-ka ah oo ku aaddan dowladaha iyo bulshada rayidka ah inay iskaashadaan oo ay xalliyaan mashaakilaadka iyadoo aan dardargelinayno horumarka aan ku marayno dariiqa net-ka ah.
Christiana Figueres, Xogheyihii Hore ee Fulinta ee UNFCCC: “Philanthropy kaligeed wax kama qaban karto isbeddelka cimilada, waana inay kaalin weyn ka qaadataa kalluumeysiga guud ahaan wax ka qabashada maareynta cimilada. Taasi waa sababta ay samafalku uga feejignaato culeyskiisa galka qalabka maaliyadeed ee loogu talagalay yareynta cimilada iyo la qabsiga. ”
Larry Kramer, Madaxweynaha William iyo Flora Hewlett Foundation: “Laga soo bilaabo mowjadaha kuleylka iyo duufaannada illaa daadadka, abaaraha iyo waxyaabo kale oo badan, saameynta isbeddelka cimilada durba waa la joogaa. Laakiin sidaas oo kale, sidoo kale, waa wadiiqooyin looga hortago - waddooyinka u baahan taageerada bulshada samafalka ah. Ogeysiiska maanta ayaa sidaas ka badan ballanqaad cusub. Sidoo kale waa baaq loo jeedinayo dadka kale - aasaaska, shakhsiyaadka ku deeqa, iyo hay'adaha samafalka — si ay u sii xoojiyaan ka qayb qaadashadooda oo ay noola shaqeeyaan si aan wax uga qabano caqabada ugu weyn ee waqtigeenna ka jirta kana ilaalinayno dadka iyo dhulkeenna musiibo cimilo ah. ”
Per Heggenes, Maamulaha guud ee Mu'asasada IKEA: “Isbedelka cimilada wuxuu khatar ku yahay dhinac kasta oo nolosheena ah, gaar ahaan qoysaska nugul. Mu'asasada IKEA, wax ka qabashada cimilada ayaa lafdhabar u ah wax walba oo aan sameyno si aan u abuurno nolol waarta. "
Gerun Riley, Madaxweynaha Eli iyo Edythe Broad Foundation: “In kasta oo aan ku hanweynahay doorka samafalku ka ciyaarayo hagaajinta nolosha, in badan oo ka mid ah shaqadani waxay noqon doonaan kuwo aan macno lahayn haddii aynaan xallin dhibaatada cimilada. Aasaaska 'Broad Foundation' waxaa naga go'an inaan wax ka qabanno halista isbeddelka cimilada annaga oo taageerayna dadaallada lagu hormarinayo fursadda dhaqaale ee bulshooyinka la takooro taariikh ahaan ee ku nool Los Angeles.
Maalgeliyeyaasha ka qayb qaadanaya dadaalkan iyada oo loo marayo Ballanqaadka 2018 GCAS ama ballanqaadyo dheeri ah waxaa ka mid ah:
Eli iyo Edythe Broad Foundation
Aaladda aasaasiga ah
Sir Christopher Hohn iyo aasaaska sanduuqa maalgashiga caruurta (CIFF)
Aasaaska Waxbarashada Mareykanka
Aasaaska Tamarta Wanaagsan
Hay'adda Grantham Foundation ee ilaalinta deegaanka
Hay'adda Grove Foundation
Sanduuqa Qoyska ee Growald
William iyo Flora Hewlett Foundation
Aasaaska Hirarka Sare
John D. iyo Catherine T. MacArthur Foundation
Aasaaska Qoyska McKinney
David iyo Lucile Packard Foundation
Aasaaska Quadrature Climate
Sanduuqa Walaalaha Rockefeller (RBF)
Aasaaska Baddaha Badda
Aasaaska Gudoomiyaha Jaalaha